ရွှေပြည်သာတွင် ရပ်/ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးရန် ကြီးကြပ်ရေး ၁၇ ဖွဲ့ ဖွဲ့ပြီး - Yangon Media Group
ရွှေပြည်သာတွင် ရပ်/ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးရန် ကြီးကြပ်ရေး ၁၇ ဖွဲ့ ဖွဲ့ပြီး
ရွှေပြည် သာမြို့နယ်အတွင်း ရပ်/ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ရန်အတွက် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ၁၇ ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုလေးခုနှင့်ရပ်ကွက်ပေါင်း ၂၂ ခုရှိပြီး နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက် အထိ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ၁၇ ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး ဖြစ်သည့်အတွက် နောက်ထပ်ကိုးဖွဲ့ဖွဲ့ရန်ကျန်ရှိနေသေးသည်။
” စိတ်ဝင်စားမှုကတော့ တစ်ရပ်ကွက်နဲ့တစ်ရပ်ကွက်မတူဘူး။တချို့ရပ်ကွက်လုံးကျွတ်လာတာရှိတယ်။ တချို့ရပ်ကွက်သုံးပုံတစ် ပုံလောက်ပဲလာကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ကြီးကြပ်ရုံပါပဲ။ သူတို့ဟာ သူတို့ရွေးကြတာပါ။ ပြဿနာမရှိတာများပါတယ်။ ရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့က ရက်ချိန်းပြန်ပေးပြီး အများ ကျေနပ်အောင်လုပ်ပေးပါတယ်”ဟု ရွှေပြည်သာမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေး မှူးဦးရဲထွန်းအောင်က နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် ပြောသည်။ အမှတ်(၁၂)ရပ်ကွက်တွင် နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်က ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့ဝင်ငါးဦးအား ရပ်ကွက်တွင်းရှိ ငြိမ်းအေးချမ်းသာဓမ္မာရုံ၌ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ အိမ် ထောင်စု ၄ဝဝ ကျော်အနက် ၁၁၁ စုသာလာရောက်ရွေးချယ်ပေးခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
”ကျွန်တော်တို့(၁၂)ရပ်ကွက်မှာ ဒီနေ့ရွေးချယ်ပွဲလုပ်တာ လေး ပုံတစ်ပုံလောက်ပဲလာပြီးရွေးချယ် ပေးကြတယ်။ စိတ်ဝင်စားမှုနည်းတာတွေ့ရပါတယ်”ဟု အမှတ်(၁၂) ရပ်ကွက်မှကိုမင်းကပြောသည်။ အဆိုပါရွေးချယ်ပွဲသို့ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ဦး၊ လဝက၊ စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနတို့မှ ဦးစီးမှူးတစ်ဦးစီလာရောက် ကြီးကြပ်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွင် ကြီး ကြပ်ရေးအဖွဲ့များဖွဲ့ပေးနေခြင်းမှာ မပြီးပြတ်သေး၍ အုပ်ချုပ်ရေး မှူးရွေးချယ်သည့်အဆင့်သို့ မည်သည့်ရပ်/ ကျေးမှ မလုပ်ဆောင်နိုင်သေးကြောင်း မြို့နယ်အုပ်ချုပ် ရေးမှူးက ပြောသည်။
ဥရောပရွှေဖိနပ်ဆုကို အသင်းဖော်များကြောင့် ရခဲ့ခြင်းဟု မက်ဆီ ပြောကြား
တိုင်းပြည်ကို စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ခဲ့မှု တရားဝင်ဟု ဇင်ဘာဘွေ တရားရုံး စီရင်ချက်ချ
ကားများတွင် ကညနထုတ် ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြား မသုံးဘဲ အခြားအမျိုးအစား တပ်ဆင်လျှင် သုံးလထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ် ချမှတ်နိုင်
တောဆင်ရိုင်းများ သ တ်ဖြတ် အရေခွံခွာယူခံနေရခြင်း ကို တုံ့ပြန်သည့်” မြန်မာ့ဆင်များအတွက် ရင်တ?
အသင်းတွင် မပျော်ရွှင်ဟူသော သတင်းများကို နောက်ခံလူ မာဆယ်လို ပယ်ချ
ဆောင်းဟေကိုနှင့် ပါ့ခ်ဘိုဂမ်တို ပါဝင်သော ဒရာမာစီးရီးသစ် ယခုနှစ် ဒီဇင်ဘာတွင် ထုတ်လွှင့်မည်
ချင်းပြည်နယ် တွန်းဇံမြို့နယ်အတွင်း စိုက်ပျိုးထားသော ဘိန်းစိုက်ခင်း ၁၂၃ ဧကကို စစ်ကြောင်းသ??